असल जीवनसाथि खोज्दै हुनुहुन्छ भने यी चिजहरु अवस्य थाहा पाउनुहोला ! - Experience Best News from Nepal
प्रकाशित मिति : बुध, पुस १६, २०७६
मानिसको जीवनमा बिवाह भनेको एकदमै महत्वपुर्ण कुरा हो ! मानिसको जीवनमा एकपटक नभई नहुने कुरा अन्तरगत बिवाह पनि एक हो ! एक जना बाट दुइ जना हुनको लागि धेरै पटक सोच्नु पर्दछ ! एक दुइ दिनको कुरा हैन जिन्दगी बिताउने कुरा हो ! विवाहको फैसला गर्नु भन्दा पहिले धेरै पटक सोच्नु पर्दछ ! आफ्नो जीवन मा असल जीवनसाथी भेटियो भने त जिन्दगि सफल र सुखी बन्न सक्छ तर जीवन साथि गलत छ भने जिन्दगि नै जिन्दगि जस्तो हुदैन
यी अक्षरबाट नाम सुरु भएका महिला हुन्छन प्रेममा यति धेरै इमान्दार !! जान्नुहोस्